Endrik'io pejy io tamin'ny 27 Janoary 2021 à 07:02
260 octets ajoutés , il y a 1 an
Endrik'io pejy io tamin'ny 27 Janoary 2021 à 06:45 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 27 Janoary 2021 à 07:02 (hanova) (esory)
Ny '''kônsily ekiomenika''' dia [[kônsily]] na fivorian'ny [[eveka]] sy ny manampahefana ara-pivavahana rehetra ao amin' ny [[Kristianisma|Fiangonana kristiana]]. Rehefa nisaratsaraka anefa ny Fiangonana kristiana nandritra ny tantaran'ny [[kristianisma]] dia nanohy nampiasa ny teny hoe ''konsily'' ny [[Katolisisma|Fiangonana katôlika]] na dia tsy nahafaoka ny Fiangonana kristiana manontolo izany fivoriana izany.
Ny [[Kristianisma ortodoksa|OrtodoksaÔrtôdôksa]], ohatra, dia tsy manaiky ny fahefan' ny konsilykônsily ankoatr' ireo enina voalohany, nefa ny KatolikaKatôlika dia manaiky ny konsilykônsily ekiomenika efatra ambin' ny folo tamin' ny taonarivo faharoa, izany hoe konsilykônsily ekiomenika miisa 21. Ny farany amin' ireo konsilykônsily ireo dia ny [[Konsily Vatikàna II|Kônsily Vatikàna II]] izay novorina tamin' ny taona 1962 hatramin' ny taona 1965. Matetika ny mpitondra fanjakana tamin' ireo taonjato nifandimby no nampanao konsilykônsily, fa ankehitriny kosa dia tsy miditra amin' izany ny fanjakana fa raharaha manokan' ny fivavahana izany.
== Ny konsilykônsily ekiomenika efatra voalohany ==
Ireto konsilykônsily efatra ireto dia eken'ny Fiangonana katolikakatôlika sy ny Fiangonana ortodoksaôrtôdôksa ary ny ankamaroan'ny Fiangonana protestantaprôtestanta.
=== Ny KonsilyKônsily voalohany tao Nikea (taona 325) ===
Ny [[Konsily voalohany tao Nikea|Kônsily voalohany tao Nikea]] (na Nisea) dia natao tamin' ny taona 325 ka ny emperora [[KonstantinoKônstantino (emperora)I|KonstantinoKônstantino]] no nampiantso azy. Io no konsilykônsily voalohany. Izany dia natao mba handraiketana ny maha [[Andriamanitra (tokana)|Andriamanitra]] an' i JesosyJesoa Kristy ka hanoherana ny fampianaran' i [[Ariosy]] ([[Arianisma (teolojia)|arianisma]]) izay noheverina ho [[fampianaran-diso]] tamin' izay. Tapaka fa mitovy fomba (''homoousia'') amin' ny [[Andriamanitra Ray|Ray]] ny [[Andriamanitra Zanaka|Zanaka]] amin' ny maha [[Andriamanitra (tokana)|Andriamanitra]] ny Ray sy ny Zanaka. Navoaka ny [[Fanekem-pinoana nikeana]]. Araka ny lovantsofina dia i Nikolasy avy any Mira (izay fantatra amin' ny hoe Masindahy Nikolà) sy i SpiridonaSpiridôna avy any TrimitontaTrimitônta dia nandray anjara betsaka tamin' io konsilykônsily io.
=== Ny KonsilyKônsily voalohany tao KonstantinopolyKônstantinôpôly (taona 381) ===
Nanamafisana ny zavatra tapaka tao amin'ny KosilinKôsilin' i Nikea ny [[Konsily voalohany tao Konstantinopoly|Kônsily voalohany tao Kônstantinôpôly]] (na KonstantinoplaKônstantinôpla) izay nanalavana ny Fanekem-pinoana nikenana ka lasa [[Fanekem-pinoana nikeana|Fanekem-pinoan'i Nikea sy KonstantinopolyKônstantinôpôly]]. Io no konsily faharoa. Ny emperora TeodosioTeôdôsio I no mampamory tamin' izany. Tapaka fa Andriamanitra koa ny [[Fanahy Masina]]. Tsy nandray anjara tamin' io ny [[Fiangonana Latina|Fiangonana latina]].
Io kosilykônsily io dia nanameloka ny fampianaran' i MakedonikoMakedôniko sy ireo pneomatomakapneomatômaka izay nanda ny maha Andriamanitra ny Fanahy Masina. Nohamafisiny ny maha Andriamanitra an' i Kristy sady nambarany fa Andriamanitra koa ny Fanahy Masina ary noraiketiny ilay fanekem-pinoana natao tamin' ny konsilykônsily voalohany tao Nikea. Io konsilykônsily io koa no nanome fahamboniana fara tampony ny evekan' i RomaRôma sy ny an' i KostantinoplyKônstantinôpôly amin' ny [[eveka]] rehetra.
=== Ny Konsily tao Efesosy (taona 431) ===
Ny [[Konsily tao Efeso|KonsilyKônsily tao Efesosy]] (na Efeso na Efezy) dia nanapahana ny maha [[Renin'Andriamanitra|Renin' Andriamanitra]] (gr.: ''Theotokos'') an'i [[Maria (renin'i Jesoa)|Maria]]. IonoIo konsilyno kônsily fahatelo. Nivoaka noho izany ny Fanekem[[Fiekem-pinoan'i Efezy|Fiekem-pinoan' i Efezy]]. Tsy eken' ny ProtestantaPrôtestanta ny fiantsoana an' i Maria ho Renin' Andriamanitra. Nitsipahana ny [[nestorianisma]] koa izany kônsily izany.
Nanambara ny maha tokana tsy mizara an' i Kristy hatrany am-bohoka ny konsily sady niantso an'i [[Maria (renin'i Jesoa)|Maria]] hoe ''[[Theotokos]]'' ("Renin'Andriamanitra"), izany hoe renin' ilay Andriamanitra ara-araka ny [[Natiora (teôlôjia)|natiora]]<nowiki/>ny. Nohelohiny ny fampianaran' i NestoriosyNestôriosy, patriarkan' i KonstantinopolyKônstantinôpôly izay nampianatra (mba tsy hampifangaroana ny olona atao hoe [[Jesosy|Jesoa]] sy ny ''Logos'' izay an' Andriamanitra) fa i Maria Virjiny dia tsy niteraka afa-tsy olombelona izay manana fifamatorana tsy azo foanana amin' ny ''Logos''n'Andriamanitra. I NestoriosyNestôriosy mantsy dia nampianatra fa miara-misy ireo natioran' i Kristy roa ireo nefa misaraka. I Kirilosy avy any Aleksandria dia nandrayNandray anjara mavitrika tamin' ny fanapahan-kevitra tamin' io konsilykônsily io i Kirilosy avy any Aleksandria. Nitsipaka io fanapahan-kevitry ny konsilykônsily io ireo Fiangonana nestoriananestôriana sady nisaraka tamin' ny Fiangonan' ny Empira.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/1000714"